Sida loo Download Online Video la Video Grabber Alternative
Video Grabber Alternative: Download Online Video ka khayr badan Video Grabber
> Resource > bedelan karo > Video Grabber Alternative: Download Online Video ka khayr badan Video Grabber
Video Grabber ayaa la sheegay in boobka free video online qalab ku caawiya dadka isticmaala in ay la wareegaan videos ee goobaha kala duwan ee ay ka mid yihiin YouTube, Dailymotion, vimeo, joojin, iwm Waxa kaliya in dadka isticmaala baahan tahay inaad samayso waa in ay galaan URL ay video door bideyso goob gaar ah. Markaas, guji download si aad u bilowdo.
Si kastaba ha ahaatee, in kasta oo ay tahay aalad la isticmaali karo sida ugu fudud ee tirinta hal ilaa saddex, dadka kale ee ka mid ah dhibaatooyin la kulmaan. Nasiib wanaag, waxa jira qalab kale oo aad isticmaali karto sidii lagu beddelan karo. Mid ka mid ah qalabka waa Wondershare AllMyTube .
Waa Converter fudud oo degdeg ah YouTube iyo downloader, kaas oo u ogolaanaya dadka isticmaala si ay u soo bixi kala duwan videos ay doonayaan in ka badan 100 video qaybsiga websites online. Waxa kale oo ay kuu ogolaanaysaa users videos ay u soo bixi qalabka la qaadi karo si ay u daawadaan si raaxo leh.
Barnaamijkan waxa fudud in la isticmaalo. Dhab ahaantii, waxaad ka heli kartaa video doorbiday kaliya click hal. Haddii aad isticmaalayso Chrome, Firefox ama IE, waxaad kala soo bixi kartaa wax kasta oo aad rabto in aad videos. Waa kuwan tallaabooyinku ku saabsan sida loo isticmaali Wondershare AllMyTube. Marka hore aad u baahan tahay si ay u rakibi on your computer.
1 Raadi videos
Waxaad ka heli kartaa meel kasta oo videos. Tan iyo qalab taageertaa tan oo goobaha video qaybsiga, waxaad balan qaadi karno in aad ka heli doonto dhowr videos aad u baahan tahay.
Marka aad hesho si aad video la doonayo, wax soo socda in aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad u soo dejisan. Waxaa jira dhowr siyaabood oo kala soo bixi videos la Wondershare AllMyTube. Mid ka mid ah hababka ugu fiican ee ka soo dejisan waa iyada oo Download button, kaas oo sida caadiga ah ka muuqan marka ogaadaa videos on website gaar ah. Si kale si aad u hesho video doonayaa waa in aad nuqulka url ee video iyo riix URL paste button arjiga.
Qaar ka mid ah dadka isticmaala walwalsan waafaqsan yahay qalabka ay yihiin. Laakiin barnaamijkan, uma baahnid inaad wax laga walwalo arrimaha waafaqsan sida ay u saamaxaya kuwa isticmaala si loogu badalo in ay soo bixi videos galay qaab doorbidayso. Dhab ahaantii, waxa ay u bedeli karaan videos for noocyada kala duwan ee qalabka la qaadi karo. Tag ka soo bixi maktabadda si aad u hesho videos aad rabto in aad si loogu badalo oo guji ka badalo button on xaq. Ka dib markii in, ay doortaan qaab ka menu hoos-hoos iyo riix OK si aad u samaysay.
Wondershare AllMyTube Sidoo kale ka shaqeeyaa si degdeg ah. Tani waxay ka dhigan tahay oo keliya in aadan u baahan tahay inaad sugto muddo dheer kaliya si aad u hesho video jeclaystay. Plus, codsiga sidoo kale leeyahay jadwaliye hawl gaar ah si ay u bixiyaan dhaw raaxadeeda waxa gargaar iyo qalbiqaboojis leh in dadka isticmaala marka duuban.
Iyada oo faahfaahinta ku xusan oo ku saabsan barnaamijkan, ma jirto sabab aad waa in aan aad uga fiirsada. Sidaas, haddii aad Cunid degsado videos online oo aad rabto in aad la kulanto fudayd iyo raaxadeeda markii duuban, ha iloobin in fiira gaar ah barnaamijkan sida ay farqiga weyn! Maxay yihiin hadalladan aad sugayso? Ha degaan qaar ka mid ah qalab video qabsado sida Video Grabber. Isku day Wondershare AllMyTube hadda!